Hiran State - News: HS:-Garoonka diyaaradaha magaalada B/weyne oo ay dayacdir ku wadaan ciidamada Amisom
HS:-Garoonka diyaaradaha magaalada B/weyne oo ay dayacdir ku wadaan ciidamada Amisom
HS:-Ciidaamada Amisom ee ku sugan magalada B/weyne ee xarunta gobolada Hiiraan ayaa booqasho ku tagay qeybo ka ka mid ah garoonka diyaaradaha oo ay maalmahan shaqo ka socotay.
Samatar Ducaale Nugul oo ka mid ahaa madaxdii maanta booqatay garoonka dayuuradaha ayaa waxa uu sheegay in garoonka magaalada B/Weyne ee Ugaas Khaliif uu ahmiyad gaar ah u leeyahay ciidamada Jabuuti iyo shacabka ku dhaqan Hiiraan haatana uu yahay mid la balaariyay isla markaana si wanaagsan loo isticmaali karo inta lo dhameystirayo adeega wali ka dhiman sida wadada oo aan wali laami aheyn.
Sidoo kale waxa ka hadlay dayactirka lagu sameeyay garoonka Ugaas Khaliif afhayeenka maamulka Hiiraan Maxamuud Nuur Cagajoof waxana uu u mahadceliyay ciidamada Amisom ee ka socda dowlada Jabuuti sida wanaagsan ee ay uga qeyb qaateen horumarinta garoonka.
Inkasta oo ay kaalinweyn ka qaatatay balaarinta mashruucaan hay'dda ICRC hadane waxey dadka ku dhaqan Hiiraan siweyn u hadal hayaan meesha ay mareen dhaqaalahii ay dhismaha garoonka u yaboohday hay'dda USAID bartamahii sanadkii tagay wallow ay arintaas warar is qilaafsan ka soo baxayaan xqiiqadeedana dhawaan la maqli doono.
Sikasta oo ay ahaataba magaalada B/weyne maahan magaalo ah sidii laga filayey marka loo eego qiimaha ay ugu fadhiso bulshada Hiiraan waxaana dib u dhaca ku habsaday loo aaneynayaa maamuladii isku bedbedelay 22kii sano ee ugu danbeysay oo ay hogaaminayeen shaqsiyaad aan aqoon duruqsan u laheyn hanaanka maamul wadaaga iyo dhalinyaro intooda badan meelo Hiiraan ka baxsan inta qandaraasyo lagu dhibaateynayo bulshada ka soo qaata dadkooda lagu xasuuqayey waayadii danbe.
· admin on January 30 2013 03:59:54 · 0 Comments · 2718 Reads ·
14,579,638 unique visits